ဆိုင်အရောင်းစာရေး Jobs in Myanmar
ဆိုင်အရောင်းစာရေး အလုပ် 382 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ထိပ်တန်း ဆိုင်အရောင်းစာရေး အလုပ်အကိုင်များ။ Alote.com.mm တွင် နောက်ဆုံး လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်ရှင်များထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါ။
Recruiter active 39 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Recruiter active 11 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Recruiter active 29 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Sales QS Engineer
Structure ၊ interior design နှင့် decoration ကျွမ်းကျင်ရမည်။ MS Office (Excel, Word & PowerPoint) နှင့် Email & Internet ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Technical Skill, Communication Skill, Interpersonal Skill, Reporting Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ အကောင်းမြင်စိတ်၊ အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ထားရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။